New Jersey bhangi rekudya rinogashira mupiro we33-kW padenga rezuva
Iyo Flemington Area Chikafu Pantry, ichishandira Hunterdon County, New Jersey, vakapemberera uye vakafumura yavo nyowani nyowani yezuva yakarongedzwa kumisikidzwa nekucheka ribhoni munaNovember 18 kuFlemington Area Chikafu Pantry.
Iyi purojekiti yakagoneswa nemubatanidzwa wekupa zvipo pakati pevatungamiriri vanozivikanwa vezuva remaindasitiri uye vanozvipira munharaunda, mumwe nemumwe achigovera zvikamu zvavo.
Pakati pemapato ese akabatsira kuita kuti kumisikidza kuve kwechokwadi, iyo pantry ine yakanyanya yekutenda - North Hunterdon High Chikoro mudzidzi, Evan Kuster.
"Sevazvipiri paFood Pantry, ndanga ndichiziva kuti vane mari yakawanda yemagetsi kune avo mafiriji nemafiriza uye ndakafunga kuti simba rezuva rinogona kuchengetedza bhajeti yavo," akagovana Kuster, mudzidzi weNorth Hunterdon High School, Kirasi ya2022. "baba vanoshanda kukambani inosimudzira simba rezuva inonzi Merit SI, uye vakati tikumbire mipiro yekutsigira hurongwa uhu."
Saka vaKusters vakabvunza, uye vatungamiriri veindasitiri yezuva vakapindura. Vachitenderera kutenderera kwavo kwekuona kwekukanganisa, yakazara yakazara slate yemaprojekiti vadyidzani anosanganisira Yekutanga Solar, OMCO Solar, SMA America uye Pro Circuit Magetsi Kondirakiti yakasaina kuchirongwa. Pamwe chete, ivo vakapa kuzadzikiswa kwese kwezuva kune iyo pantry, vachirerutsa gore rega rega magetsi bhiri emadhora 10,556 (2019). Ikozvino, iyo nyowani 33-kW system inobvumidza iyo mari kuti igovaniswe pakutenga chikafu chenharaunda yavo - yakakwana kugadzirira 6,360 chikafu.
Jeannine Gorman, director director weFlemington Area Food Pantry, akasimbisa kukosha kwesimba idzva iri. "Dhora rega ratinoshandisa pamari yedu yemagetsi rakadzikira dhora ratinogona kushandisa chikafu chevagari," akadaro Gorman. “Tinoita basa redu zuva nezuva; zvinokurudzira zvikuru kwatiri kuti tizive kuti nyanzvi dzinotarisira zvakakwana kuti dzipe nguva yavo, tarenda uye zvekushandisa kutibatsira kuti tirambe tichipa zvido zvemunharaunda medu. ”
Uku kuratidzwa kwerupo kwaigona kunge kusiri iko kwenguva, zvichipiwa kukuvadza kwakakonzera denda re COVID-19. Pakati paKurume naMay, paive ne400 nyowani nyowani pane iyo pantry, uye mumwedzi mitanhatu yekutanga yegore, vakaona kuwedzera kwe30% muvatengi vavo. Sekureva kwaGorman, "kupererwa pazviso zvemhuri sezvo vaifanira kukumbira rubatsiro" hwave humbowo hwekuti denda iri rakakanganisa chiremerera, richitambanudzira vazhinji kumatanho ezvavanoda ivo vasati vamboona.
Tom Kuster, CEO weMerit SI nababa vaEvan, vaidada nekutungamira chirongwa ichi. "Kutarisana nedenda repasi rose iri pasina mubvunzo kwave kunetsa kuvanhu vese veAmerica, asi zvanga zvichinyanya kuomera nharaunda dzisina kuchengetedzeka uye dziri panjodzi," akadaro Kuster. "KuMerit SI, tinotenda basa redu sevanhu vemakambani kuunganidza mauto nekukweretesa rubatsiro chero panodiwa zvakanyanya."
Merit SI yakapa iyo dhizaini dhizaini uye mainjiniya, asi zvakare yakaita semurongi, kuunza vazhinji makiyi vatambi mubhodhi kuti zviitike. "Tinotenda kune vatinoshanda navo nekupa nguva yavo, hunyanzvi, nemhinduro kuchirongwa ichi, izvo zvinobatsira zvakanyanya nharaunda ino panguva yeguva iri uye zvisina kumboitika," akadaro Kuster.
Iwo epamberi mutete-firimu rezuva ma module akapiwa neFirst Solar. OMCO Solar, nharaunda uye yekushandisa-chiyero OEM yezuva tracker uye ekumisikidza mhinduro, akaisa iyo pantry rondedzero. SMA America yakapa iyo Sunny Tripower CORE1 inverter.
Pro Circuit Magetsi Kubvumirana yakaisa irwo, ichipa ese emagetsi uye akajairwa basa.
"Ndiri kushamiswa nekubatana pakati pemakambani mazhinji akazvipira kuita chirongwa ichi ... ndinoda kutenda kune vese vakapa, nevanhu vakaita izvi zvikwanisike," akadaro Evan Kuster. "Changa chiri chiedza chakanaka kuti isu tese tibatsire vavakidzani vedu tichikanganisa shanduko yemamiriro ekunze."